Nagu saabsan | Hangzhou Zkong Networks Co., Ltd.
Barnaamijyadeenna ESL-yada ayaa diyaar u ah in loo adeegsado tiknoolajiyada Bluetooth iyo NFC, qaab dhammaystiran oo muuqaal ah, iyo muuqaal saddex-midab leh. Marka laga reebo soo bandhigida faahfaahinta sheyga sida qiimaha, keydka, iyo kor u qaadida, waxaan sidoo kale u habeyn karnaa calaamadaha wixii macluumaad ah ee lagu kala diri karo iyo qaababka u baahan.
Iyada oo tiknoolajiyada casriga ah ee qaabdhismeedka daruuriga ah iyo xiriirka wireless, Zkong uu si fiican u daboolay dalabaadka kala duwan ee kumanaan kun oo dukaanno ah oo adduunka ah, uuna ka caawiyo inay ka badbaadaan caqabadda ku-oolnimada wada-shaqeynta hooseysa, sicirka qaladka qiimaha sarreeya, ka ganacsiga xun ee aasaasiga ah iyo kor u kaca qiimaha hawlgalka. .
Asal ahaan ka soo saarista soo saarista calaamadaha elektaroonigga elektaroonigga ah (ESLs), waxaan u koraynaa shirkad hormuud ah oo bixisa qalabka IoT iyo barxadda Cloud oo bixisa xalal iyo adeegyo dhameystiran Xalkeenna casriga ahi waa tallaabo muhiim ah oo loogu talagalay dukaamada casriga ah si looga beddelo leben dhaqameed iyo hoobiyeyaal loo beddelo ganacsiga Omnichannel. Waxaanan ka faa'iideysaneynaa dukaamada iyo dukaameeysatada xitaa khibrad wanaagsan oo dukaan ah, taas oo, dukaameeyayaashu ay ka heli karaan qiimo, dallacsiin, heerar saamiyadeed, dib u eegis bulsheed, iyo wixii macluumaad ah ee ay ka filayaan shelf, tafaariiqlayaashuna waxay ka heli karaan aragti macmiil isla markiiba xogta weyn oo ay horumariyaan iibintooda si aad u hufan oo kharash badbaadin leh.
In ka badan 15 sano, waxaan ku guuleysanay rikoodh ganacsi oo heer sare ah, waxaanan u adeegnay macaamiil ka kala socda 35 dal. Waxaan si iskaashi dhow ula shaqeynaa qaar badan oo ka mid ah noocyada tafaariiqda adduunka ugu waaweyn, sida Alibaba Group, Lenovo Group, Vodfone, China Mobile, Coop Group, E-ink, Qualcomm, iyo kuwo kale oo badan.
Aragtidayadu waa inaan Codsanno calaamadaha shelf ee Elektaroonigga ah (ESLs) ee Dukaan kasta oo Smart ah. Hadafkeenu waa inaan balaarino shabakad ganacsi oo xitaa faa'iido badan leh caalamka. Waxaan soo dhawaynaynaa la-hawlgalayaasha adduunka oo dhan si loo dhiso iskaashi qotodheer, waxaanan diyaar u nahay inaan kor u qaadno iibintaada isla markaana aan ku hagaajino soohdimahaaga xalal horumarineed.
U ogolow 3000 dukaamada iskaashatadu inay ku dhiiradaan inay ka tanaasulaan sumadaha qiimaha waraaqaha dhaqameed oo ay toos ula hadlaan khaanadaha